अष्ट्रेलियामा आइटी कोर्स कसरी गर्ने ? यसका फाइदाहरु के के छन् ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०४:०० |
मेलबर्न । अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा आईटीको डिमाण्ड नभएको शायदै देश होला । झन् त्यसमाथि विकसित मुलुक अष्ट्रेलियामा त यसको निकै ठूलो माग छ । साँच्चिकै भन्नुपर्दा अष्ट्रेलियमा आईटी पढ्नेले काम पाउँन कुनै पापड बेल्नुपर्दैन । अनलाइनमा आफ्नो योग्यता र दक्षता देखाइ देखाइ चाहे जस्तो रोजगारी पाउँन सकिन्छ । किनभने औद्योगिक क्षेत्रमा निकै अगाडि बढिरहेको अष्ट्रेलियामा सूचना र प्रविधिको माग पनि उच्च छ । आइटी कोर्षले तपाईलाई सामान्य डिजाइन गर्नेदेखि कामको संयोजन गर्न,व्यवस्थापन गर्न र ठूला ठूला अनुसन्धान र आविस्कार गर्न समेत दक्ष बनाइदिन्छ । र, यी सबै कामहरु अष्ट्रेलियाका लागि निकै आवश्यक छन् ।
त्यसैले अष्ट्रेलियाका विभिन्न विश्वविद्यालय र कलेजहरुले आइटी कोर्षलाई निकै प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रोग्रामिङ,डेप्लोभमेन्ट,डिजाइनिङ र मल्टिमिडिया आदि जस्ता विविधतापूर्ण कोर्ष हुने भएकोले पनि आइटी कोर्ष अष्ट्रेलियामा धेरै विद्यार्थीहरुको रोजाईमा पर्ने गरेको छ ।
अष्ट्रेलियामा आइटी कोर्स गर्नका फाइदाहरु :
अष्ट्रेलियामा कुनै पनि कोर्ष सिध्याउँनु भनेको विश्वमै सर्वस्वीकृत डिग्री हासिल गर्नु हो । किनभने अष्ट्रेलियाको डिग्रीलाई महत्व नदिने संसारमा कुनै त्यस्तो देश वा विश्वविद्यालयहरु छैनन् । किनभने अष्ट्रेलियाको डिग्री आफैंमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको हो । त्यसैले अष्ट्रेलियामा आइटी डिग्री लिएकाले संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि रोजगारी गर्न सक्छन् । आइटीका लागि विश्वका उत्कृष्ट १०० वटा विश्वविद्यालयमध्ये ८ वटा अष्ट्रेलियाका छन् । त्यसैले विश्वस्तरीय आइटीका कक्षाहरु यही उपलब्ध छन् । साथै विदेशी विद्यार्थीहरुका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले आकर्षक छात्रवृत्तिहरु पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
आइटी अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयको छनौट कसरी गर्ने ?
अष्ट्रेलियामा आइटी सम्बन्धी झण्डै ११ सय कलेज र शैक्षिक संस्थाहरु छन् । यस्तो अवस्थामा कुन चाहिं राम्रो भनेर छनौट गर्नु मुस्किल काम हो ।
तर केही कुराहरुमा ध्यान दिनुभयो भने शैक्षिक संस्था छान्न तपाईलाई कुनै गाह्रो हुँदैन । सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालय छान्नु भन्दा अगाडि तपाई उक्त विश्वविद्यालयबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ? त्यो तय गर्न जरुरी छ । जस्तो तपाई त्यस्तो विश्वविद्यालयको खोजीमा हुनुहुन्छ होला जसको रिजल्ट र प्रसिद्धि साँच्चिकै डायनमिक होस् । यसरी तपाई आफूमा क्लियर भएपछि विश्वविद्यालय छान्न तपाईलाई कुनै गाह्रो हुँदैन । किनभने तपाई जुन राज्य र शहरमा बस्नुहुन्छ,त्यही पनि तपाईले खोजे जस्तो आइटीका विश्वविद्यालयहरु प्रसस्तै छन् ।
अष्ट्रेलियामा आइटीमा भर्ना हुन आवश्यक योग्यताहरु :
अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरुमा आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाउँन तपाईको शैक्षिक योग्यता प्रमाणित गर्न अनिवार्य छ । कोर्ष र विश्वविद्यालय अनुसार योग्यताको मापदण्ड भने फरक फरक हुनसक्छ । विदशी विद्यार्थीहरुले अँग्रेजी भाषाको दक्षता सम्बन्धी परीक्षा अर्थात आइएलइटीएस टेस्ट उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पनि बुझाउँन आवश्यक छ ।
–हिमालयन कङ्गारु ‘करियर’ डेस्क
Previousसरकारको आलोचना गरे कर्मचारीमाथि कारबाही
Nextकस्तो रह्यो डोनल्ड ट्रम्प र किम जोङबीचको वार्ता ?